Firefox 69 ikozvino inowanikwa kurodha pasi. Firefox 71 inouya ku Nightly chiteshi | Linux Vakapindwa muropa
Mozilla yakamaka 3 Gunyana pakarenda yayo kuvhura vhezheni itsva yebrowser yayo, asi izvo hazvireve kuti isu taifanira kumirira kuvhurwa zviri pamutemo kuti tikwanise kuishandisa. Vagadziri vazhinji vanoisa zvisikwa zvavo kumaseva avo vasati vatanga, chimwe chinhu chinowanzoitwa neMozilla uye chinotibvumidza shandisa Firefox 69 zuva rapfuura kubva pazvakange zvakarongwa.
Tinofanira kuomerera kuti iyo kuvhura haisi yepamutemo. Izvi zvinoreva kuti kambani haina kuburitsa chero chirevo, havasati vavandudza iyo peji renhau yeFirefox 69 uye kuti hazvisati zvichikwanisika kugadzirisa kuburikidza neOTA. Izvi zvinoreva zvakare kuti hatizokwanise kudhawunirodha vhezheni itsva kubva kune huru uye yepamutemo peji rekurodha, asi tinogona kurirodha pasi kubva papeji reFTP server yedu yatinokwanisa kuwana kubva Iyi link (Linux).
1 Chii Chitsva muFirefox 69
2 Firefox 71 ikozvino yave kuwanikwa paNightly chiteshi
Chii Chitsva muFirefox 69
Nhau dzichasimbiswa kubva mangwana, asi iyo runyorwa rwemashoko kubva kune yazvino beta Firefox 69 inosanganisira zvinotevera:
Matipi matsva muWindows kunyatsoisa zvemukati zvekugadzirisa matanho epamberi, zvinoreva kuti yakawanda processor nguva yakashandiswa pamabasa iwe auri kushanda nesimba uye shoma processor nguva yakashandiswa pazvinhu zviri kumashure (kunze kwevhidhiyo uye odhiyo yekutamba).
Kuti uvandudze hupenyu hwebheteri pamachina eMacOS ane maviri makadhi emifananidzo, Firefox parizvino ine hukasha inoedza kuita kuti GPU ive nesimba rakawanda reWebhu yeGL pazvinogoneka. Firefox inoshandawo zvakaomarara kuti isachinjira kune iyo-yepamusoro-simba GPU kune yakasarudzika kushandiswa kwenguva pfupi kweWebGL..
Iyo MacOS Finder ikozvino inoratidza kufambira mberi kwekuburitswa kwemafaira ivo vachiri kurodha pasi.
Wakawedzera rutsigiro rweAuthentication HmacSecret yekuwedzera kuburikidza neWindows Hello pane masisitimu anomhanya Windows 10 Chivabvu 2019 Gadziridza kana gare gare.
Sarudzo ye "Nguva Dzose" kubva kuFlash yemukati plugin yabviswa. Iye zvino isu tichagara tichikumbirwa mvumo tisati taita Flash yezvinyorwa.
Firefox haisisiri mitoro userChrome.css o userContent.css default. Kana tichida kugadzirisa Firefox tichishandisa mafaera aya tinofanirwa kugadzirisa zvido toolkit.legacyUserProfileCustomizations.stylesheets seta "ichokwadi" kutora mukana uyu.
Kana mangoti kuvhurwa kuri pamutemo, tinogona kurodha pasi vhezheni itsva kubva kune yako peji peji kana kumirira ivo kuti vagadzirise vhezheni yezvakachengetedzwa zvekugovera kwedu.
Firefox 71 ikozvino yave kuwanikwa paNightly chiteshi
Mozilla's beta chiteshi inopa Firefox 69 kubvira Mugovera wadarika. Kuti kune kana kuri kuuya kutsva kwakatsiga zvinoreva kuti dzimwe shanduro dzinofanira kuvandudzwa, uye Firefox Husiku yasvika vhezheni 71 nhasi. Panguva ino iyo nhau inosvika neFirefox 71 haizivikanwe, asi munguva pfupi isu tichatanga kutsvaga nekutsikisa nhau dzayo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Linux software » Kutamba kweshanduro: Firefox 69 ikozvino inodonhedzwa; Firefox 71 inouya kuchiteshi chehusiku
Haikwanise kutorwa pasi
Mhoro Jose. Iwe unogona nezuro kubva kuMozilla FTP server (chinongedzo muchinyorwa) uye iwe unogona kubva pane yakajairwa peji kubva nhasi.
Maitiro Peru akadaro
Zvakaipa ivo vanobvisa iyo "inogara iri" flash sarudzo.